6 mibvunzo varimi vanogona kuzvibvunza | Ehupfumi Zvemari
Vashandi vanogona kazhinji kuzvibvunza mibvunzo yakawanda iyo isingagoni kupindurwa nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Munyaya ino ticha kuratidza zvimwe zvezvinonetsa kuti tinokwanisa kugashira inopfuura nguva imwe uyezve tichavapindura. Chingave chikonzero chekuti iwe usarudze kuita mari yako yekuchengetedza kuburikidza nemisika yemaketi. Nenzira yakachengeteka uye kuchengetedza nzvimbo dzako.
Ndiine mibvunzo yakajairika seyandinofanira kuita nemari yangu pane ino inotevera zororo? Iye zvino zvatiri padhuze nemazuva anotarisirwa. Asi sedzimwe nzira dzinogona kuve dzinonakidza kune chero mudiki uye wepakati investor uyo anoda kutora zvinzvimbo mumisika yequity, asi nekuchengetedzeka kukuru. Ehezve, inogona kuwanikwa kuburikidza neimwe yemibvunzo iyi yatichazokubvunza. Ivo vanogona kukubatsira iwe kuisira mari yako mune imwe nzira chaiyo.
Pakupera kwezuva, zvazviri ndezvekuti iwe une kusahadzika kushoma kana iwe uchizo isa odha yekutenga mumisika yemari. Icho chinangwa chisina kunyanya kuomarara kuita asi icho chinogona kukuunzira mabhenefiti mazhinji muhurongwa hwekudyara hwauchazoshandisa kubva panguva dzino chaidzo. Kunyangwe kuzvisanganisa nemamwe masisitimu kusarudza ekuchengetedza uye emusika masheya zvikamu zvichaita zvakanakisa mumazuva anotevera kana mavhiki. Eheka zvichave zvakakodzera kuzviitira nyore uye kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi. Zvekuti mukupedzisira iwe unogona kuve neyakawedzera buoyant chiyero muakaunti yako yekuchengetedza.
1 Nzira dzekuzorora
2 Kubheja pane kudonha mumatanda
3 Kupfuura zvinotsigirwa muhomwe
4 Kukosha kwezviratidzo
5 Real-nguva makotesheni
6 Iyo nguva yekukudziridza rebound
Chii chandinofanira kuita nemari yangu mune ino inotevera zororo? Takatarisana nemamiriro ezvinhu aripedyo kudaro, hapana mubvunzo kuti mune mafaro nzendo dzekudzima kubva kuzviitiko zvezuva nezuva, chinhu chinokurudzirwa ndechekukanganwa kwemazuva mashoma kuti zviwanikwa zvedu zvinoshanduka sei uye, izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nehurongwa hwakapetwa huviri ndizvo inowanikwa kune vese vashandisi misika yemasheya. Pakutanga, tichisiya maakaundi edu muhuwandu hwemari, ndiko kuti, kubvisa nzvimbo dzekutenga uye kana vachinge vasvika kubva parwendo, tanga nzira yekutenga. Uye, chechipiri, pachishandiswa zvirevo zvine mamiriro izvo zvinoita kuti nzvimbo dzekutenga dzigadziriswe pamutengo wakati.
Muzviitiko zvese izvi, zviri nyore kwazvo kushandisa matanho anozobvumidza mushandisi kushandisa mazuva mashoma nerunyararo ruzere rwepfungwa kwavanoenda, achiziva kuti odha yavo ichaiswa zvine mutsindo kana ikasvika pamutengo watakapa kutengesa iyo share, izvo zvinogona pamwe zvinowirirana, semuenzaniso, pamwe nematanho ekurwisa. Iyo yekupedzisira ndiyo imwe nzira kunyanya inokurudzirwa kwenguva yezororo kufanana neiya inomiririra mwedzi yezhizha. Pasina chero komisheni kana muripo kubva kubhangi kana kubhengi rekuchengetedza.
Kubheja pane kudonha mumatanda
Ini ndinogona kuwana purofiti kubva kune yakashomeka nzvimbo yemisika yemari? Ehe, hongu, uye mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti varimi vane mukana wekutendeukira kune zvakasiyana zvigadzirwa kuti vazvirime kana equities inowira munguva pfupi. Muzviitiko zvakawanda izvi zviwanikwa zvine chinangwa chekuzadzisa purofiti yepamusoro mune chero musika mamiriro, angave ari akatsigira kana emabhureki. Mune chero mafomu, izvo zvigadzirwa zvinosiyaniswa zvese nekuoma kwekuita kwavo uye nenjodzi huru iyo inosanganisira zvido zvemusimari, izvo kunyangwe zvichikwanisa kuwana zvakakosha zviwanikwa, zvinogona zvakare kurasikirwa nemari yakawanda.
Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa zvigadzirwa ndizvo zvinonzi Kiredhiti kutengesa iyo ine basa rakanyatsotsanangurwa: masangano emari ari mukutarisira kukweretesa kuchengetedzeka kunodiwa nemutengi, uyezve vozvitengesa pamutengo wezuva. Ipapo iro bhangi rinopa mushandisi kusvika pamwedzi mitatu yekudzorera iwo mutengo pamutengo wavanayo panguva iyoyo uye uyo, maererano nekufungidzira kwavo, unenge wakadzikira pane uno. Nekudaro, muzvinashawo anowana mutsauko. Chero zvazvingaitika, rudzi urwu rwekushanda runotakura njodzi huru, kwaunogona kusiya mari yakawanda munzira.
Kupfuura zvinotsigirwa muhomwe
Chii chinoitika kana kukosha kukapfuudza iwo marondedzero etsigiro? Kana rutsigiro rwakaboorwa, ipapo mutengo unowedzera kudonha zvakanyanya: stock yaputsa chipingamupinyi chakawanikwa mukuderera kwayo, uye kana izvi zvichinge zvapfuura, zvinowira zvakasununguka, saka mutengo wekutengesa unofanirwa kuchinjiswa nedanho rekutsigira. . Rini kuramba kunokurirwa, kune rimwe divi, mutengo zvakare unofarira kusimuka zvine simba.
Iyi ndiyo mhedzisiro iyo yainayo yakanangana pamutengo wechengetedzo kana index uye iyo inofanirwa kugara ichiongororwa nemusimari ku purofiti kubva pamabasa ako. Rutsigiro (kuramba) danho rinosimbisa sezvo mutengo unofamba uchibva pairi mushure mekunge waedzwa. Kana mutengo ukaita 8% mushure mekuyedza rutsigiro, inoonekwa seyakasimba pane dai yainge yaungana chete, semuenzaniso, 5%. Iri izano rinobatsira kwazvo kune vashoma uye vepakati varimi mune uptrends mumisika yekutengesa.
Sei iyo MACD ichikosha kudaro? Chimwe chezviratidzo zvinogona kubatsira pakutengesa pamusika wemasheya ndiyo MACD (Kufambisa Avhareji Convergence Divergence) kana, mushanduro yayo muchiSpanish, kusangana kana kupatsanuka kwevhareji inofamba, uye ine zvinhu zvitatu: iyo MACD, chiratidzo uye histogram. Yekutanga, MACD, ndiwo musiyano uripo pakati pematanho maviri ekutsanangura anofambisa ehurefu hwakasiyana: yekutanga avhareji inonzwisisa kufamba kwemutengo munguva pfupi uye yechipiri ivhareji yepakati-yepakati. Chinhu chinowanzoitika kushandisa musiyano uripakati pegumi nemaviri-nguva inofamba avhareji uye makumi maviri nesere-nguva inofamba avhareji, kunyange hazvo mimwe miitiro inogona kutorwa.
Zvakanaka, iyo MACD inofamba ichitenderedza yepakati mutsetse kana zero mutsetse, isina yepamusoro kana yakadzika miganho, zvinoenderana nechero maitiro. Mune ino zero zero zvinonzwisiswa kuti masimba ekuda kufanana akafanana neayo ekuwanisa, ayo MACD ari munzvimbo inotorwa seasina kwazvakarerekera. Pamusoro peiyi zero mutsetse, ichi chiratidzo chinotanga kuve chakanyanya kubhadharwa uye pazasi peichi nhanho inotanga kutariswa. Asi pfungwa yekunyanyisa kutenga kana kuwedzeredza haifanire kutarisirwa kusvikira iyo MACD yafamba zvakaringana kure nezero mutsara, uye iyi miganho inowanzoiswa nevanodzikira kana kukwirira icho chakaratidzwa ichi chati.
Unogona here kutevedzera mutengo wechengetedzo munguva chaiyo? Ehe hongu, semuenzaniso, kuburikidza neS & P 500 Sezvo iri rondedzero yakaoma kutevera, inoda nhevedzano yezvishandiso kuti igone kuidzora zvakanyanya, inova imwe yezvichemo zvakajairika kubva kuvashambadziri vakaiswa mumusika uyu. Chimwe chazvo chiri kuburikidza teedzera makotesheni ako munguva chaiyo inogona kuitwa nenzira dzakasiyana, nguva dzose kuburikidza nekubhanga pamusoro mutsetse: mahara, kuunganidza mashandiro anodikanwa mugore rapfuura mumusika uno.
Kana nekunyorera chaicho-chenguva sevhisi kwegore rimwe, maunogona zvakare kuwana a voucher-bhegi, inopihwa nezvimwe zvinhu, pamwe nekubatanidzwa kwe makomisheni emahara pamutengo mumwe chete wekunyorera, unoshanda kune chero chigadzirwa chakabvumidzwa kuburikidza ne bhuroka. Mutengo wekunyorera uku unenge wakakosheswa panosvika zana mayuro, kunyangwe mune chero mamiriro ezvinhu zvinokupa mvumo kune akateedzana emahara mashandiro mukati megore izvo zvinoderedza kuburitswa kwemari kuchazofanirwa kuitwa.
Iyo nguva yekukudziridza rebound
Ndezvipi zvikonzero chaizvo zvinoita kuti mutengo utangezve kubuda? Kana musika ukatyoka zvakadzika, kusagadzikana uye kutya kunowedzera, nepo kunzwa kwekusaisa mari pachikamu chevashambadzi vadiki nepakati kukura. Iko hakuna kuvimba uye "maoko akasimba" haako mumusika futi. Iyo inzvimbo yakanaka yekuti rebound iitwe. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kutsvaga zvikonzero zvetariro kwakaoma uye zvinonetsa kuti mari iende ku parquets stock exchange. Vatengesi vanorega, kutengesa kunopfuurira uye kunzwa kwekusununguka kudonha kunotonga.
Kune rimwe divi, oversold ine yakakwira kwazvo zvikamu, mune dzimwe nguva kunze kweyakajairika. Ndipo apo, nekushamisika, kufamba kwechinguvana kumusoro kunotanga kunobata, nekuchinja kwakachinja, vaponesi vasingaverengeke vasina chivimbo nehumwe nekuti vanotenda kuti mitengo yemasecurity ichawira zvakanyanya muzvikamu zviri kuuya. Chiitiko mukushanduka kwemisika yemasheya inoratidza izvo kana kuiswa kwacho hakuna parinogumira kana kusingaperi kudonha. Izvi iwe unofanirwa kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi kuti uite mashoma mashoma angangoita zvikanganiso mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 mibvunzo varimi vanogona kuzvibvunza ivo
Chii chiri shanduko yemari yekudyara?